Kitapo kisary tokana sy maoderina miisa 5 ho an'ny finday avo lenta | Androidsis
Amin'ny fananana Android tsara kokoa noho ny nahitan'i Lollipop fanalahidy mety hametrahana azy ho toy ny rafitra miasa ho an'ny fitaovana finday miaraka amina endrika lehibe, indraindray dia hadinontsika fa afaka mamaka ROOT ny findaintsika isika na manova ny sary masina rehetra miaraka amin'ireo fonosana manome endrika tsara an'io birao io. Ny marina nanomboka tamin'i Marshmallow, Android dia manana pint tsara tarehy, fa ny tsara indrindra dia ny manohy manana izany fanaingoana lehibe izany eo am-pelatanantsika mba hanomezana endrika tokana sy maoderina ho an'ny tendro sy crannies an'ity OS ity ho an'ny fitaovana finday, izay napetraka indrindra eto an-tany amin'ny finday avo lenta sy takelaka.
Ka ndao hiezaka hizara aminao dimy amin'ireo fonosana kisary tsara indrindra Inona no misy amin'izao fotoana izao amin'ny Android manome fiovana tsara ao anatin'ny iray volana tahaka izao izay matetika no tsara indrindra hanombohana ny vanim-potoana indray amin'ny asa, fandalinana ary raharaha hafa amin'ny fiainantsika. Maimaimpoana ireo fonosana kisary ireo ary samy manana ny kalitaony tsara ny tsirairay amin'izy ireo, noho izany dia hasehontsika ny lafiny mampiavaka azy tsirairay.
1 KAIP - Sary masina
2 Desaturate - Kitapo kisary maimaim-poana
KAIP - Sary masina
Ho an'ireo mpampiasa mitady sary mihetsika misy lantom-peony amin'ny famirapiratana sy ny hamirapiratra dia KAIP dia fonosana izay tokony hosedraina farafaharatsiny. Ity fonosana kisary ity dia hanome izay rehetra mamirapiratra amin'ny efijery samihafa amin'ny birao misy anao maherin'ny 750 sary masina sy fiaviana 28 amin'ny efijery.
Sary masina avo lenta amin'ny Design Material Hiditra eo imasonao tsara izy ireo mba hanasongadinana izany famolavolana bebe kokoa izany amin'ny Android madio izay tena eken'ny besinimaro, na amin'ireo faritra ireo. Ny kinova maimaim-poana amin'ity fonosana ity dia mihoatra ny ampy hanomezana fiovana tsara ny finday finday avo lenta, noho izany dia efa maka fotoana hitsapana ny lokony eo amin'ny birao finday Android-nao.
Desaturate - Kitapo kisary maimaim-poana
Ity fonosana kisary ity dia miaraka Sary masina 1.500 150 ary koa background XNUMX ny efijery na ny sary an-tsary mba hahafahanao manana safidy betsaka. Manana fomba fijery maizimaizina izy ireo miaraka amina loko miloko izay mifanentana tanteraka amin'ireo sary mivoaka tonga ao anaty fonosana.
Ny tena ifantohana dia asehoy ny loko ihany izay ilana azy ary desaturate any amin'izay tsy misy. Kitapo kisary izay misy zavatra tsy manam-paharoa ary afaka mandeha ianao mba hanana endrika hafa hita maso eo amin'ny biraonao.
Mihodina amin'ny a isika izao fonosana kisary mampihomehy, falifaly sy vaovao. Ireo no toetra telo tokony halehany alohan'ny sary miisa 2.200 misy sary miisa 20 hisafidianana. Lohahevitra tena tsy manam-paharoa izay hamoaka izany tsiky izany na fifaliana misy fahatsapana hafa amin'ny takelaka birao.
Ny fiahiahiana dia mitranga alohan'ny alàlan'ity sary mihetsiketsika ity izay miasa lafatra miaraka amin'ireo sary natolotr'izy ireo. Raha mitady zavatra mahafinaritra ianao ary miaraka a sarisary mikasika Aza adino izany. Ity fonosana antsoina hoe Fluxo ity dia miavaka fotsiny.
Ese Pix pixel miresaka be dia be momba ireo lalao video rehetra tonga isika, toa ity iray ity izay lasa andriamanitra ianao, Android dia mamela antsika hitady fomba fijery Retro miaraka amin'ity fonosana mahafinaritra ity antsoina hoe VIT. Raha ireo lalao video pixelated retro pixelated ireo no tianao, dia ho tia ity fonosin'ny kisary ity ianao.
Manana mihoatra ny Sary miisa 330 sy sary sokitra 10Ka raha mpankafy zavakanto pixel ianao dia ho anao tsotra izao.
Izahay izao dia mivadika lohahevitra fotsy miaraka amin'ny mihoatra ny Sary masina 2.000 30 sy sary sokitra XNUMX. Raha na inona na inona antony dia manana sary masina ianao izay tsy ao anaty fonosana, ny zavatra tsara dia hiseho amin'ny sarontava izy io mba hitovizany amin'ilay lohahevitra mihitsy. Izy io dia mitazona ny zava-drehetra ho fanamiana ary miaraka amin'ny hatsarana fahita manintona ho an'ny biraonao.
Ireto sary masina ireto dia natao ho QHD mampiseho noho izany dia tena hampatahotra azy ireo amin'ny telefaona misy an'io efijery io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Kitapo maoderina maoderina, maimaimpoana ary tsy manam-paharoa izay tsy azonao adino
Fluxo sy Desaturate's counterparts dia tsara koa: Toxic sy saturate, tsirairay avy
Miasa indray io !! Hack Pokemon Mandehana miakatra haingana ary misambotra Pokemons ho azy
Ny fampahalalana rehetra momba ny Samsung Galaxy Note 7 vaovao